Izindaba - Ingilazi yaseBrithani izwakala isiphuzo esihlinzekwa ngebhokisi lezinto ezisetshenziswayo kuma-DSS aseScotland
IBritish Glass ixwayise ukuthi amabhizinisi amaningi abucayi ku-isiphuzo esihlinzekwa isiphuzo azothinteka kabi yiScottish Deposit Return Scheme (DRS).
UDave Dalton, umphathi omkhulu, Ingilazi yaseBrithani, engqungqutheleni Yokupakishwa Kwezemvelo
Ngenxa yokwethulwa ngo-2022, iBritish Glass ithe ukukhathazeka kufaka ukuwa okungabakhona kokuphinda kusetshenziswe kabusha kwe-kerbside ngengilazi, ukwanda kwenani lokupakishwa kwepulasitiki ne-CO2 ukuphuma.
Isikhulu Esiphezulu uDave Dalton ubhalele uHulumeni waseScotland echaza ngalezi zinkinga, futhi wathi iBlass Glass izokwenza konke okusemandleni ukuqondisa ukuqaliswa kwe-DRS ukuqinisekisa ukuthi izinto ezibalulekile ziyabhekelwa futhi zacela isihlalo imboni ezosebenza kwi-Implementation Advisory Group njengoba udaba oluphuthumayo.
Ngokwehlukana, uthe umsebenzi wokuhlukanisa ama-decarbonisation uyaqhubeka nokubhekana ne-Glass Futures yase-UK kanye neFaceace entsha esanda kumenyezelwa yesikhungo sekusasa eJalimane.
I-Glass futures izoba yindawo yokuqala efinyeleleka kalula, yokuncibilikisa ingilazi eyaziwa umhlaba wonke kanye nesizinda esikhulu sokucwaninga kweminye imithombo kaphethiloli ongasetshenziswa ezingubeni - into esemqoka ekusizeni isigaba seengilazi ukuthi sifinyelele kwelitshe ukuwohloka kwe-decarbonise ngonyaka ka-2050 futhi sibe yinsalela- zero kokukhishwa kwekhabhoni.
Ifenisha entsha esanda kumenyezelwa izoba yisithando sokuqala samafutha amakhulu sama-hybrid oxy-fuel sokuqalisa amandla afinyelela kabusha emhlabeni. Izothatha indawo yemithombo yamandla yamanje futhi inqume ukuphuma kwe-CO2 ngama-60%. Kokunye kokuqala, abakhiqizi bezingilazi abangamashumi amabili basebenza ndawonye ukuxhasa iphrojekthi yokushayela izindiza nokufakazela umqondo. I-Ardagh Group izokwakha isithando somlilo eJalimane ngonyaka we-2022, ngokuhlolwa kwemiphumela yokuqala efanelekile ngo-2023.
I-DRS kwaphasiswa imiyalo izolo ntambama (13 Meyi) yize izingcingo ezivela embonini, abathengi, kanye nama-MSP aphikisayo ukuthi abambezele.
Amalungu e-SNP (36) avotela ukuthi kuvotelwe amaConservatives avotelwa (16) nabasebenzi kanye neLiberal Democrats draining (19).
Ephawula ngomphumela, uDave Dalton, umphathi omkhulu waseBrithani Glass uthe: "Besingedwa ekuceleni uHulumeni waseScotland ukuthi abambezelele imithetho ye-DRS kuze kube yilapho umthelela we-COVID-19 waziwa. Amabhizinisi amaningi, kufaka phakathi leyo ngxenye yomkhakha wethu kanye ne-supply chain awekho esimweni sokubhekana nomthwalo owengeziwe uhlelo oluzowubekela wona.
"Siyaqhubeka nokukholelwa ukuthi enye imodeli yokukhiqiza eyiwehlisiwe ye-Extended Disergency (EPR) izonyusa amanani wokuphinda usebenzise ingilazi, isebenze kakhulu imali futhi inikele nge-CO kabili.2 ukonga ukwedlula iDRS eScotland.
“Noma singakholelwa ukuthi i-DRS yisisombululo esifanele sokuphinda kusetshenziswe kabusha izingilazi, sizosebenzisana noHulumeni waseScotland nomphathi wezinhlelo ukunciphisa umonakalo embonini yezingilazi zaseScotland futhi siqinisekise amanani aphakeme kakhulu okuphinda asetshenziswe kabusha ukuze ahlinzeke ikhwalithi ebalulekile futhi inani ledatha elifunekayo abakhiqizi bethu bengilazi.
Isikhathi sokuthumela: Jun-04-2020